2-4-1 PORNSTAR MARTINI နှင့်အခြားအဖြူရောင်မိန်းကလေးများသည်သူမ၏ကျောင်းသားချေးငွေကိုသုံးစွဲကြသည် - သတင်း
2-4-1 Pornstar Martini နှင့်အခြားအဖြူရောင်မိန်းကလေးများသည်သူမ၏ကျောင်းသားချေးငွေကိုသုံးစွဲသည်
လှပသော Leeds ကျောင်းသားများနှင့်သူတို့၏အဖြူရောင်အဖြူရောင်သင်တန်းနည်းပြများ၊ မီးပွားများဖြင့်သင်ဝိုင်းရံထားသည့်အခါ၊ အဖြူရောင်မိန်းကလေးပုံသဏ္holdာန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အဆုံးမဲ့ဒေါ်လာကိုဖြုန်းခြင်းသည်ရယ်စရာကိစ္စမဟုတ်တော့ပါ။ ဒါဟာရှင်သန်မှုပဲ။
ငါတို့မရှိရင်ဘယ်သူကတောက်ပနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်ထိန်းထားမလဲ။ Boohoo ကိုဘယ်သူတွေစီးပွားရေးလုပ်မှာလဲ။ ပြီးတော့စျေးကြီးလွန်းပေမယ့်သာယာလှပတဲ့ကော့တေးအားလုံးကိုဘယ်သူသောက်မလဲ။
ရှုပ်ထွေးလှသော Leeds VS ၏အခြေခံအဖြူရောင်ခွေးအကြားတိုက်ပွဲသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုငွေချေးစာချုပ်များကိုဆက်လက်တောက်ပနေပါ။ ထို့အပြင်၊ သင်၏ overdraft ကိုအခြားမည်သည့်အရာများအတွက်အသုံးပြုမည်နည်း။
နေ့စဉ်ငွေရောင် hoops များရှိတယ် - carr ငါ့နားကပ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ - ကြည့်သည်။ ထို့နောက်ရွှေအလတ်စားများသည်သင်၏ရွှေရောင်အိတ်နှင့်အတူ ၀ တ်ဆင်ရမည်။ အကြောင်းမှာသတ္တုများရောနှောခြင်းသည်လူအားလုံးအတွက်အလွန်စိတ်သောကရောက်စေသည်။ ပြီးတော့ Gavin ကသင်၏နံနက် ၉ နာရီတနင်္လာနေ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲအတွက်သူတို့ကိုတန်ဖိုးထားမည်မဟုတ်သောကြောင့်သင် Fruity အတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသည့်ဂန္တ ၀ င်ပိုမိုကြီးမားသည့်ပိုများသောပိုများသောစုံတွဲသည်။ ထိုအခါမူကား၊ ယနေ့ညညရောက်သောအခါသင်ကတစ်ကိုယ်ရည်ငွေအပြည့်နှင့် 'ငါသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ပါ။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်နွယ်နေသည်' မလား၊
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ scrunchie ကိုရှာပြီးနောက်ထပ် pack နှစ်ခုကို ၀ ယ်လိုက်ပါ
သငျသညျပြီးပြည့်စုံမိုd်းမလင်းမှီပန်းရောင် scrunchie ကိုရှာဖွေပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်, oh shit, သုံး pack ကိုထဲမှာတွေ့သောအခါသင်သိ။ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာအခြားနှစ်ခုမှာရွံစရာကောင်းသောစိမ်းလန်းသောသစ်တောနှင့်ထူးဆန်းသောအဝါရောင်အရိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အလေးအနက်ထားတဲ့လျောက်ပတ်သောအရောင် combo ကိုရှာဖွေရန်ဤမျှခက်ခဲသည်အဘယ်သို့နည်း သင်သုံး packs နှစ်ခုကို ၀ ယ်လိုက်တယ်၊ ဒါဆိုခင်ဗျားတို့အာကာသထဲမှာပန်းရောင်ခြစ်ရာနှစ်ခုထည့်ပြီးဒေါ်လာနှစ်ဆသုံးနိုင်တယ်။
စာသင်ချိန်အသစ်တစ်ခုမှာမှတ်စုစာအုပ်၊ လက်တော့အဖုံးနှင့်ခဲတံအသစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ paperchase ဟာမင်းရဲ့စကျင်ကျောက်နဲ့ကြေးနီလိုအပ်ချက်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးတာ၊ အခြေခံပန်းရောင်ရှိအရာအားလုံးကိုရှေ့မျက်နှာဖုံးပေါ်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့ inspo quote နဲ့အတူမှာထားလို့ပဲ။
သင် Eddy B ၌ထိုင်နေစဉ်သင်၏ကော်ဖီစွဲလမ်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အတွက်စာကြည့်တိုက်မှလင်းတများသည်သင့်အားအော်ဟစ်နေစဉ်တွင်ချစ်စရာကော်ဖီခွက်ကိုစွဲကိုင်ထားပါ။ အလေးအနက်ထား Susan, ငါရေအပေါ် 4000 စကားလုံးအက်ဆေးရေးသားဖို့ထင်ပါတယ်သလဲ?!
မင်းရဲ့ဘဝကပြိုကွဲသွားပေမဲ့၊ အဖြူရောင်မိန်းကလေးပုံဟာအားနည်းချက်အားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသတိရစေဖို့စာရေးကိရိယာနဲ့ Ted Baker ခဲတံအိတ်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတ်စုစာအုပ်အသစ်သည်သင်အမှန်တကယ်မဖတ်ရသေးသောအချက်ကိုသိသာထင်ရှားစေသည် မဆို သင်၏လုပ်ရန်စာရင်းတွင်သင်အကြိမ်မည်မျှရေးသားသည်ဖြစ်စေစာဖတ်စာရင်းတွင်စာရင်းသွင်းပါ။
tan အတု - So. အတော်များများ။ ပုလင်း။
ဟုတ်ပါတယ်၊ လိဒ်မှာ ၁ ဒီဂရီပါ။ ဟင့်အင်းငါ Mischief အတွက်တင်းကျပ်စွာ ၀ တ်ဆင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အဖိုးတန်အချိန်အတုကိုဤခြေထောက်များကိုညှိပြီးကျွန်ုပ်၏ကျန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသောအခါကျွန်ုပ်သည်မစုံလင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါကတင်းတိမ်တွေ ၀ တ်တာ၊
သငျသညျ mutliple tan mits အတုဝယ်သူတို့အစားထိုးပြီးတော့မပါလျှင်ထိုအရာတို့ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအရ, စိန့် Tropez လက်ငင်း tan နှင့်တစ် ဦး mit အပေါ်တစ် ဦး သဘောတူညီချက်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်နှစ် ဦး စလုံးဝယ် COURSE ။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးအားကစားယောက်ျားလေးတွေကမင်းကမင်းကမင်းသမီးလို့ထင်နေတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ထိုအနီရောင်ဘောင်းဘီအသစ်များပေါ်ထွက်လာလျှင်မိန်းကလေးများနှင့်အတူကော့တေးများတွင်သူတို့ကိုသင်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်ငါတို့အားလုံးသိသည်ကော့တေးများသည်နီယွန်မီးလုံးများနှင့်ဘစ်စတာတွင်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့အား ၂-၄-၁ Pornstar Martini's ကိုရယူပါ၊ ထို့နောက်ဒေါ်လာစျေးနှင့်အရက်စီးလာအောင်လုပ်ပါ။
ရာဇပလ္လင်ဇာတ်လမ်းတွဲ4လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု၏ဂိမ်း
ဇွန်းအိုးများသည်လည်း ၁၀/၁၀ ရှိသော်လည်းသင့်ဝတ်စုံအသစ်ကိုထိုက်သင့်သည့်ပွဲ ဦး ထွက်မဟုတ်ပါ။
Browsing Echo Falls ဖန်ခွက်ပါသည့် Boohoo မတော်တဆ 'Buy' ကိုနှိပ်
Boohoo နှင့် Missguided တို့ကိုဘယ်တော့ရောင်းမလဲ။ သူတို့ကသင့်ကို '70% Off' နဲ့ 'နောက်နေ့အခမဲ့' ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးသင်ရုတ်တရက်သင်မလိုအပ်သောအဝတ်အစားအတွက်£ 40 သုံးစွဲသည်။ သူတို့ရောက်သောအခါဘာမျှမသင့်တော်ပါ။ cba မှလွဲ၍ အရာရာကိုမုန်း။ ပြန်လည်ပို့ရန် cba မှလွဲ၍ သင်၏ပြည့်လျှံ ၀ တ်စားဆင်ယင်အဝတ်သည် ပို၍ ပင် shitty အဝတ်ဖြင့်ကျွေးသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းမွန်သူများမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တိတ်ဆိတ်စွာနေနိုင်ပါသလား။ Mac Mineralize Skinfinish နှင့် Becca ၏ရှမ်ပိန်ပေါ့ပ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်တွေ့နိုင်သနည်း။ ငါကြိုးစားခဲ့မူးယစ်ဆေးဝါး highlighter တိုင်း chunky, တောက်ပနှင့်နှစ်စက္ကန့်ပြီးနောက်ပွတ်တိုက်။ Soooo, ငါတို့တကယ်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက် - adios Superdrug ဝယ်ဖို့ရှိသည်ခန့်မှန်း။
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားချေးငွေများ adios ။